Lomiri dia efa zava-misy ao amin'ny Ubuntu Touch's OTA-12 | Ubunlog
Ubuntu Touch OTA-12 dia tonga mamita ny tetezamita mankany Lomiri, fantatra amin'ny anarana hoe Unity 8
Aorian'ny fampandrosoana 7 volana sy OTA-11 izay llegó Miaraka amin'ireo fiasa vaovao toy ny kitendry marani-tsaina kokoa, UBports dia nahafinaritra azy manambara ny fanombohana ny OTA-12 an'ny Ubuntu Touch, tetikasa iray izay niandraiketan'izy ireo hatramin'ny nialan'ny Canonical azy. Na dia misy vaovao manamarika aza ao, angamba ny tena manamarika indrindra dia ny fifindrana mankany lomiriizany hoe, ny anarana Unity 8, tany am-piandohana, satria sarotra kokoa ny niatrika azy, na tamin'ny resaka resadresaka na tamin'ny fivoarany.
Ny isa Unity izay misy an'ity vaovao ity kinova dia 8.20, saingy izao no lazainay mba hanandramana tsy hamorona fikorontanana be loatra amin'ny fanovana anarana. Izy ireo ihany no manonona azy io ho "Unity8 (Lomiri) 8.20", ary tsy hoe antsoina hoe; dia ny hanaovan'izy ireo mazava amintsika fa ny tontolon'ny sary misy azy dia tsy misy intsony ny "Firaisan-kina" amin'ny anarany, saingy fantatr'izy ireo fa mety ho ela loatra vao manomboka mampiasa "Lomiri" fotsiny izy ireo. Etsy ambany misy anao ny lisitry ny vaovao izay anisany ity OTA-12 ity.
Vaovao avy ao amin'ny OTA-12 sy i Lomiri vao nivoaka
Tetezamita feno mankany Unity8, ao anatin'izany ny fanovana maro. Lomiri no iantsoana azy ankehitriny ary ny fanovana ny kaody dia ho vita ara-potoana.
Ny fanovana sary amin'ny efijery an-trano, ny Dash, izay misy ambadika fotsy ankehitriny, ary ny Drawer ho lisitr'ireo fampiharana vaovao.
Fitsapana mandeha ho azy mba hahitana bibikely sy hanamboarana ireo taloha.
Mir 1.2, nohavaozina tamin'ny v0.24 tamin'ny 2015. Anisan'izany ny fanohanana an'i Wayland, saingy mbola tsy navadika ho an'ny fitaovana miorina amin'ny Android. Izy io dia miasa amin'ny telefaona toy ny PinePhone sy ny Raspberry Pi.
Palette loko vaovao izay manome fifanoherana tsara kokoa amin'ny ankapobeny.
Fanatsarana ny kitendry, ao anatin'izany ny swipe eo amin'ny fihetsika ambany mba hivoahana amin'ny klavie mankany amin'ny sosona fanovana. Raha tapitra indroa ny ampahany banga amin'ilay sosona fanovana, hiverina amin'ny maody kursor sy fifantina isika.
Ny fanatsarana ao amin'ny tranokala Morph, toy ny maody manokana na afaka misintona rakitra izao ny webapps.
Ireo fitaovana miaraka amina loko maromaro dia afaka mampiasa azy io hanondroana ny fiovan'ny toetranao. Ny led dia hamirapiratra volomboasary rehefa ambany ny bateria, volomboasary matanjaka rehefa mameno sy maitso rehefa feno ny famenoana.
Ny kernel takiana amin'ny Anbox dia nampiana amin'ny kernel default ho an'ny Nexus 5, OnePlus One, ary FairPhone 2.
Ny OnePlus One dia mihozongozona tsara rehefa manindry bokotra.
Ankehitriny dia mampiasa ny lakilen'ny Google OAUTH azy ireo izy ireo mba hampavitrika sy hampifanarahana ny fifandraisana amin'i Google sy ny kalandrie.
Bebe kokoa. Lisitry ny fanovana feno, eto.
Mba hanatsarana ity OTA-12 ity ary hanombohana mampiasa Lomiri, ny mpampiasa efa misy dia tsy maintsy miditra amin'ny efijery Fanavaozana ny fikirakirana ny rafitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Ubuntu Touch OTA-12 dia tonga mamita ny tetezamita mankany Lomiri, fantatra amin'ny anarana hoe Unity 8
pablojet dia hoy izy:
Nanaraka azy aho hatramin'ny nanombohan'ny tetik'asa mikasika, tsy afaka nanandrana izany velively aho fa tiako ny manohy io fivoarana io ...
Mamaly an'i pablojet
Tambajotra Wi-Fi, mahazoa tenimiafina ho an'ny tambajotra voatahiry
Zentyal, distro tena tsara hamoronana mpizara eo an-toerana